डा. मनिश पोखरेल काठमाडौं विश्वविद्यालयका एशोसिएसट प्रोफेसर हुन् । ई–गभर्नेन्स र क्लाउड कम्प्युटिङ विषयमा विद्यावारिधी हासिल गरेका पोखरेल २० वर्षदेखि प्राध्यापन पेशामा छन् ।
सूचना प्रविधि विज्ञकाे रूपमा परिचित डा. पाेखरेल पछिल्लाे समय स्मार्ट सिटी निर्माण अभियानमा लागिपरेका छन् । उनीसँग सूचना सञ्चार प्रविधि क्षेत्रकाे समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छाैं :
एउटा के करा बझ्र्नपर्छ भने हाम्रो देशको विकास पनि आइटीबाटै सम्भव छ । यो विश्वभर प्रमाणित भएको कुरा हो । हामीले हरेक क्षेत्रमा अाइटीको प्रयोग गर्न सक्नपर्छ । यदि आइटीलाई माइनस गर्यो भने विकास सम्भव छैन । उद्योग, कलकारखाना, शिक्षा, कृषि, पानी आदिलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने आइटी नै चाहिन्छ ।
अहिले पुर्वी युरोपका पोल्यान्ड, रोमानिया आइटीकै कारणले माथि आएका हुन् । यस्ता ज्वलन्त उदाहरण धेरै छन् । हामीले आइटीलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने ५ वर्षमा देशलाई कायापलट गर्न सक्छौं । यसकारण अबकाे राज्य संरचनामा यसकाे प्रयाेगलार्इ ध्यान दिन अत्यावश्यक छ ।
अहिले स्मार्ट सिटीको खुबै चर्चा भइरहेको छ। के हो स्मार्ट सिटी ? नेपालमा कसरी स्मार्ट सिटीको अभ्यास भइरहेको छ ?
स्मार्ट सिटीका लागि मुख्यतः अनुसन्धान नै आवश्यक भएकाले हामीले रिसर्च सेन्टर खोलेका छौं । यसमा आइटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसअन्तर्गत इन्टरनेट अफ थिंङ्स अर्थात् आइओटी अनिवार्य रहेछ । यसपछि आइओटीको अनुसन्धान गर्दा इन्टरनेटश्नल युनिभर्सिटीका एक प्रोफेसर भेट्टायौ । सो युनिभर्सिटीसग हामीले एमओयु गरेर आइओटीमा काम गरिरहेका छौं । स्मार्ट सिटीकाे कुरा अाउँदा हामी अमेरिका, बेलायत, जापानको उदाहरण लिन्छौं । तर, उनीहरुको स्मार्ट सिटीको परिभाषा हाम्रोभन्दा विल्कल फरक छ ।
स्मार्ट सिटी भनेको नेपालामा एयरपोर्टदेखि कलंकीसम्म फ्लाइगं ओभर हुँदै होइन । काठमाडौंमा मोनोरेल हुँदै होइन । ५ वर्षमा सब वे सम्भव नै छैन । मल्टी स्टोरिज बिल्डिङ पनि गार्हाे छ । अहिले ट्राफिक जाम, फोहर व्यवस्थापन, खानेपानी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेर आएको छ । यसको समाधानका लागि नै इन्टरनेट अफ थिंङ्स मुद्धा उठाएका हौं । प्रविधिले अब नयाँ शहर निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ ।
पेपर एन्ड पेन्सिल बेस्ड लर्निङ हुँदै कम्प्युटर बेस्ड लर्निङ र त्यसपछि ई-लर्निङ आयो । यी सबै एक समायमा लोकप्रिय थिए । आधुनिक समयमा अर्को शिक्षण विधि आइसकेको छ, जसबाट विद्यार्थीले घर, क्यान्टिन वा जहाँ बसेर पनि शिक्षकको असाइनमेन्ट पाउन, बुझाउन, लेक्चर सुन्न सक्नछन् ।
हामी यसलाई Ubiquitous Learning वा U- Learning भन्छौं । जुनसुकै समयमा जहाँबाट पनि कुनै डिभाइसको प्रयोगबाट यो सम्भव छ । एनटिएको एमआईएस रिपोर्टअनुसार हरेकको हातमा मोबाइल पुगिसेको छ । यसमा पनि स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । साथमा ग्रामीणतहमा शिक्षाको स्तर उकास्न यो प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हाम्रो अनुसन्धानले तथ्य ल्याएको छ ।
ब्रेनड्रेनलाई रोक्ने हो भने राज्यले स्वदेशमै बहुराष्टिय कम्पनीहरुलाई ल्याउने काम गर्नुपर्यो । यो सम्भव छ । भारत बंगलादेशमा सिस्को, माइक्रोसफ्ट आएर काम गर्न सक्छ भने नेपालमा किन ल्याउन सकिदैन ? हाम्रा विद्यार्थीहरु ग्रयाजुएट भएर बाहिर राम्रा काम गरिरहेका छन् । यहाँ नसक्ने भन्ने नै होइन । यसका लागि स्वदेशमै आवश्यक वातावरण तयार पार्न जरुरी छ ।
लिभिंग विथ आइसिटीक सह सम्पादक शिब बस्नेतले लिएको डा. पोखरेलसंगको अन्तर्वार्ता कार्तिक महिनाको लिभिंग विथ आइसिटीमा प्रकाशन भएको थियो । म्यागजिन पढ्नको लागि यो लिंक क्लिक गरि डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।